Permalink Reply by aung kyaw win on January 30, 2013 at 10:13pm ဒီနေရာအထိ ရောက်လာသူများကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မြန်မာစာ မြန်မာစကား မြတ်နှိုးလို့သာ.....။
ကျွန်တော် အစက ဇော်ဂျီသုံးတယ်၊ နောက် နည်းစနစ်အရ (ဇာတိမာန်လည်းပါတာပေါ့) မြန်မာ၃ ကို ပြောင်း သုံးတယ်၊ အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က မြန်မာ၃ ကို ရုံးသုံးသတ်မှတ်တယ်လို့ သိတာကြောင့်ပါ၊ အစ်ကိုရေ .... ကျွန်တော် အမှားတွေများကုန်ပြီဗျာ။ မှားတာများတော့ တောင်းပန်ရမှာတောင် ရှက်လာတယ်ဗျာ၊ ပညာရှင်တွေကိုလည်း အားနာပါတယ်။ စနစ်တွေများလွန်းတော့ ဘာလက်ကွက်သုးံ ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့ ကျွန်တော် မောင်ယူစာ အပြစ်ပါ၊ ဆရာဦးသိန်းဦး ကျမ်းမာပါစေ၊ ဆရာဦးတင်ဝင်းအောင် ကျမ်းမာပါစေ၊ ဆရာဦးသောင်းတင် ကျမ်းမာပါစေ၊ ဆရာ အားလုံး မြန်မာစာ မြန်မာတာဝန်ကျနိုင်ပါစေ၊ မြန်မာစာ ပီသနိုင်ပါစေ။ သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့မြန်မာ။ ......
Permalink Reply by suyutu on February 12, 2013 at 7:20pm ကြှနျတျော အံ့အားသငျ့မိတဲ့ အခကျြတဈခုရှိတယျ။ web site တှမှော ဇျောဂြီကို ဇျောဂြီ၊ ယူနီကုဒျကို ယူနီကုဒျလို့ ကွညောရငျ(declear) ရရဲ့သားနဲ့ ဘာဖွဈလို့ မကွညောကွတာလဲ။ ဒီလိုဆိုရငျ လူတိုငျးဖတျလို့ရမှာပါ။ ဇျောဂြီက ဝကျဘျကို လကျဝါးကွီးအုပျထားတာလား။ ဇျောဂြီမသုံးပဲနဲ့ ဖတျလို့မရအောငျလို့ လုပျထားတာလား။ ပွောပွပေးပါအုံး။ နောကျတဈခုကတော့ myanmar font မပါပဲနဲ့ ဖတျလို့ရအောငျ (လေးထောငျ့အတုံးလေးတှေ ပျေါမနအေောငျ) web font ကိုသုံးရငျ ရတယျလို့သိရပါတယျ။ စမျးတော့ မကွညျ့ရသေးပါဘူး။ facebook မှာ ယူနီကုဒျနဲ့ ရေးထားတာကို ယူနီကုဒျနဲ့ရော၊ ဇျောဂြီနဲ့ရော ဖတျလို့ရအောငျ လုပျလို့ရပါတယျ။ page တဈခုလို ပါတယျ။ static html လို apps တဈခုကို သုံးဖို့လဲ လိုပါတယျ။ ဒီ apps တှကေ iframe ထဲမှာ HTML ကို support လုပျပါတယျ။ facebook မှာ timeline စတဲ့ အခြိနျကစလို့ default landing tab ကို ထောကျပံ့မပေးတော့ ပါဘူး။ ဒီတော့ tab တဈခုအနနေဲ့ပဲ အသုံးပွုရမှာပါ။ နမူနာ ဒီမှာကွညျ့လို့ရပါတယျ။ တဈခွား ပစျေ့တှမှောတော့ မတှဖေူးသေးပါဘူး။
နောကျတဈခုကတော့ myanmarlanguage.org မှာ ယူနီကုဒျ site တှပေါလို့ ဖျောပွထားတဲ့ site တဈခြို့မှာ ဇျောဂြီသုံးပွီးရေးနတော တှရေ့ပါတယျ။ ဒီတော့ယူနီကုဒျ site ဆိုတာရဲ့ အဓိပ်ပာယျ ဖှငျ့ဆိုခကျြက the site which is using ယူနီကုဒျလို့မဟုတျဘူ:နဲ့တူပါတယျ။ တဈကယျလို့ မဟုတျခဲ့ဘူး ဆိုရငျ ကိုခဈြ ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျယောကျက ရှငျးပွပေးနိုငျမလား။ example site
Permalink Reply by WINEYUAUNG on March 25, 2013 at 12:37pm မြန်မာယူနီိကုတ် တွေ့ရှိရသည့် Error များ
- Office 2007တွင် Myanmar 3ကို စတင်ရိုက်နေချိန်တွင် အဆင်ပြေပြီး(ြ )၊ (ြ ) (ါ)(ျ)(့ )စသည့် အက္ခရာများ ရိုက်နေချိန်တွင် myanmar3 font မှ bit font သို့ ပြောင်းသွားပါသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေရှင်းပေးကြပါ။ ဆရာကိုရာဗီ
Aisa Tech LoneLaye မှ တောင်းဆိုပါသည်။
Permalink Reply by Than Swan Aung on December 23, 2013 at 9:57pm အဲဒါကတော့ မြန်မာ၃ နဲ့ ဇော်ဂျီတို့ရဲ့ပြသနာပါပဲ ..... တကယ်မသုံးမယ့်ဟာကိုဖျက်မှ အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်
Bit font တို့ ပိတောက်တို့နဲ့ပါ ညှိကုန်ရော
Permalink Reply by Win Myanmar Systems on August 28, 2013 at 9:17am For free downloadable Unicode resources, here are downloadable files:
Permalink Reply by Poe Hud on January 28, 2014 at 4:31pm hello, I would like to get help from anyone here.
I tried to install Alphazawgyi Version3on 32 bit Win7. When I do that, the installation process always stuck on the stage of copying font to system font folder and aboutasecond later, it's hanging there and the keyboard and font is not installed.
But there'saAlphaZawgyi folder under C: and install/remove on control pannel list.
But I am not able to remove or uninstall that, it show an error says can't find the log file.
If anyone out there knows this issue and any solution for that, could you share the solution please.